Na dia tsy be mpankafy ny Cash Buster avy any IWG, dia ho toy izany lalao vaovao avy amin'izy ireo toy ny Super Cash Buster dia manolotra loka lehibe kokoa sy tsara kokoa noho ny Cash Buster. izany petra-bola maimaim-poana tsy spins ilaina lalao video mahatonga anao mahaliana kokoa loka sy entana ny voly.
Momba ny developer Fanjakana ny harena
IWG dia mpitarika developer sy ny mpamatsy ny aterineto, Lalao fandresena hatrany ho fanta-daza loteria sy ny filokana mpandraharaha. Ny orinasa lalina mahatonga hanintona sy mahaliana lalao ary izany petra-bola maimaim-poana tsy spins ilaina lalao dia iray tamin'izy ireo.
izany petra-bola maimaim-poana tsy spins ilaina lalao dia nilalao mampiasa horonan-dice fa tsy mahazatra reels sy spins. Alohan'ny manomboka manorotoro ny kilalao miendrika biriky, tokony hametraka ny Bet. Ataovy ny Bet ny vola takiana amin'ny fipihana eo (+) ary (-) bokotra. Rehefa napetrako ny loka, tsindrio eo amin'ny PLAY hanomboka. Hahazo 8 horonana ny loko dice, mihodina fotsiny ity dice mba haneho ny loko. Ny andian-tsoratra ny mitovy loko miaraka amin'ny andian-tsoratra izay nifanila ny loko ihany no nopotehiny ao amin'ny faritra lalao. Ny loka latabatra ahitana andalana ho amin'ny slots ho samy hafa loko. Ny isan'ny sakana nopotehiny ao amin'ny faritra lalao no hanapa-kevitra ny fomba maro slots izany loko feno ao amin'ny loka latabatra. Noho izany, ohatra, raha nopotehiny 4 ny biriky mena eo amin'ny faritra lalao, 4 slots ny mena ho feno laharana eo amin'ny latabatra loka. Ianao koa mahazo ny fahafahana hanangona fanampiny endri-javatra sy ny loka avy hatrany rehefa mandeha manorotoro ny kilalao miendrika biriky.
Ny endri-javatra fanampiny ity petra-bola maimaim-poana tsy spins ilaina lalao dia:
Rehefa hamotipotika ny andian-tsoratra izay Extra Roll naseho teo amboniny, mahazo fanampiny horonan-dice.
Rehefa hamotipotika ny andian-tsoratra izay manana vola loka naseho teo amboniny, mahazo ny loka vola.
Rehefa hamotipotika ny andian-tsoratra izay manana lalao Mini naseho teo amboniny, mahazo milalao ny mini-lalao.
Rehefa mahatanteraka ao andalana iray manontolo ny loko eo amin'ny latabatra loka, no mahazo ny loka aseho ho amin'izany laharana.
izany lehibe ho an 'ireo izay efa nilalao Cash Buster, fa dia ho tia ny beginners koa. Ny RTP noho izany petra-bola maimaim-poana tsy spins takiana dia mikasika ny lalao 88.25%.